ကောင်လေးတို့စကားဝိုင်း (Conversation Lesson) - Myanmar Network
ကောင်လေးတို့စကားဝိုင်း (Conversation Lesson)
Posted by zar ni (My Way!) on July 10, 2013 at 18:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကောင်လေးတို့ဆုံမိလျှင် ဘာအကြောင်းတွေပြောလေ့ရှိပါသလဲ။ ဂိမ်းအကြောင်းလား၊ နိုင်ငံရေးအကြောင်းလား၊ သူတို့နှစ်သက်ရာ ဂီတရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းလား။ သေချာတာကတော့ မိန်းကလေးချောချောလေးတွေအကြောင်း မပါမဖြစ်နေမှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေရင်း ကောင်မလေးအမိုက်စားလေးတစ်ယောက်ဖြတ်သွားလို့များတော့
"Damn. Did you see that girl?" သေစမ်း။ မင်းဟိုကောင်မလေးကိုတွေ့လိုက်လား။
"Wow. She was hot." ဟာ . . . လန်းတယ်ကွာ။
"Yo yo. Check her out. Over there by the payphone." ရို့ရို့ . . . ဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်း။ ဟိုမှာ ဖုန်းရုံဘေးနားမှာ။
"Look at her cleavage. She's showing half her breasts."
"Her legs are so fine." ခြေတံလေးတွေလှလိုက်တာ။ (သွယ်လျနေတယ်)
"Oh my gosh. A girl of that caliber only comes around onceayear." အလိုလေးလေး။ ဒီလိုကောင်မလေး(အမိုက်စား)မျိုးက တစ်နှစ်မှတစ်ခါလာတတ်တာ။
Caliber ကို urban dictionary က ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထားတယ်။ Excelling in charm, incredibly good looking, Perfection.
Caliber isasynonym for magnitude.
Hot is commonly used to describeagirl who is very sexy.
Cleavage is the space between the breasts.
တစ်ခါတစ်လေမှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်မြင်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ဖောက်သည်ချချင်တယ်။
"I saw this girl at the bus station an hour ago. She was the sexiest thing I have ever seen."
ဒီကောင်မလေးကိုငါခုန တစ်နာရီလောက်တုန်းက ကားမှတ်တိုင်မှာတွေ့ခဲ့တာ။ ငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာတော့ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအရာလေးပဲဟေ့။
"I was shopping at the mall, and I saw this girl in tight jeans. She was hot. I was drooling just looking at her."
ငါကုန်တိုက်ထဲမှာဈေးဝယ်နေတုန်းလေ။ အဲဒီကောင်မလေးက ဂျင်းဘောင်းဘီအကျပ်နဲ့ကွ။ လုံးဝလန်းတယ်။ ကြည့်ရုံနဲ့တင်သွားရည်ကျတယ်ကွာ။
"I went to the bookstore andagirl was leaning over to pick upabook. I saw half her breasts and they were tight."
စာအုပ်ဆိုင်သွားတုန်းက ကောင်မလေးတစ်ယောက် စာအုပ်ကုန်းကောက်လိုက်တာ × × × × × ×
I'm married and all, but I couldn't help looking at her."
ငါအိမ်ထောင်နဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို မကြည့်ဘဲကိုမနေနိုင်ဘူး။
“အဖိုးမဖြတ်နိုင်တာအဖွား” ဆိုတဲ့ဟာသလို ယောက်ျားလေးတွေကိုအဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအရာကလည်း မိန်းကလေးတွေပဲပေါ့။ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာပါမောက္ခ Dr. Terri D. Fisher ရဲ့သုတေသနအရ ယောက်ျားလေးတွေဟာ တစ်နာရီကို တစ်ကြိမ် (သို့)နှစ်ကြိမ်လောက် sex, food, sleep အကြောင်းစိတ်ရောက်ပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့လည်း မိန်းကလေးတွေရဲ့ညှို့ငင်နိုင်တဲ့မွေးရာပါပိုင်ဆိုင်မှုဟာ သူမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှဆိုတာမဆန်းဘူးပေါ့။ မိမိကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကို ဒီလိုမျိုးတွေပြောနိုင်တယ်။
"I likeagirl withalot of curves."
"I like all girls withagreat body."
"I like skinny girls."
"I likeagirl with smooth skin."
"Since I'm pretty tall, I wantatall skinny girl."
"I likeagirl who likes to have fun."
"I like girls who are smart. I can't stand airheads."
"I like all pretty girls."
"I like obedient girls."
"The most important trait for me is wisdom. I wantagirl who is wise."
ငါ့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဥာဏ်ပညာပဲ။ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးပဲကြိုက်တယ်။
"It's important that the girl is smart and intelligent."
"I wantagirl who is going to take care of me."
"I like athletic girls because I like to play sports."
ကိုယ်မလိုချင်တဲ့ပုံစံ၊ မကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းရှိမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။
"I can't stand girls with attitude."
"I hate stuck up girls."
"The worst kind of girls are high maintenance girls."
high maintenance =
၂။ အမြဲတမ်းအပြင်ပန်းအသွင်အပြင်နဲ့သူများကိုဆုံးဖြတ်တတ်သူ။ မိမိကို လူတကာထက်သာတယ်ထင်သူ။
"Stay away from nagging girls. You'll want to kill yourself afteramonth with them."
တဗျစ်တောက်တောက်ပြောတတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေတော့ဝေးဝေးရှောင်ဟေ့။ တစ်လလောက်တွဲမိတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကို သတ်သေချင်စိတ်ပေါက်သွားမယ်။
"It bothers me whenagirl is not independent."
"I don't like skinny girls who are like toothpicks. It's just gross."
ကဲဒီလိုဆိုတော့ကောင်လေးတို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံတဲ့အခါ စကားဝိုင်းဖွဲ့လို့ရပြီပေါ့။ သူ့အကြိုက်၊ ကိုယ့်အကြိုက်အမြင်ခြင်းဖလှယ်ကြပြီးစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်လေးတွေမက်နိုင်ပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတို့၊ ပလာဇာတို့ရောက်ရင် မျက်စိစားပွဲထိုင်ကာ အချင်းချင်းတီးတိုးမှတ်ချက်လေးတွေပေးနိုင်ကြပြီပေါ့။ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
Permalink Reply by Ratan Biswas on July 11, 2013 at 14:26
Permalink Reply by hninhninkhaing on July 11, 2013 at 14:26
NICE AND CLEAR WRITING.
Permalink Reply by Latt Thuta Zaw on July 13, 2013 at 22:41
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ပြောနေကျလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်စာအနေနဲ့လေ့လာနိုင်အောင် ရေးပြီးတင်ထားပေးတဲ့ ကိုဇာနည်ကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ...
Permalink Reply by thandarmyint on July 16, 2013 at 16:55
Permalink Reply by tinmaunghtwe on August 27, 2014 at 14:58
Thank ... let me know grammar usage.
Permalink Reply by waidakyawthan on August 18, 2015 at 12:52
Permalink Reply by Yemin Htay on August 18, 2015 at 13:30
Permalink Reply by Nandar Tun on August 18, 2015 at 16:44